आनन्द को मकान कहाँ छ? Manor आनन्द: त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्ने?
आनन्द - हवेली, को मास्को क्षेत्र मा स्थित। बैंक जो को सबै भन्दा ठूलो शहर परिसर मध्ये एक छ, ऐतिहासिक सम्पदा निहित मा Stupino जिल्ला Lopasnya नदी बग्छ। पूर्ण XVII-XIX सदियों फारममा गठन संरक्षित छ प्रसिद्ध आनन्द। तर सुन्दर ऐतिहासिक र वास्तुकला स्मारक विलुप्त को कगार मा छ।
को Manor को संस्थापक
आनन्द - क्याथरीन द्वितीय द्वारा उच्च विज्ञान को एकेडेमी निर्देशक, पाँच भाइ कान्छा Orlov, स्थापित जो Manor। व्लादिमीर जी धेरै प्रारम्भिक एक अनाथ भए र भाइहरूलाई हेरचाह मा बसे। उहाँले विदेश अध्ययन, तर सबै रूसी को धेरै रुचाउनु र फ्रान्सेली कुरा कहिल्यै। अकादमी को निर्देशक बन्ने, त्यो खेद राज्य बाहिर उनको नेतृत्व, र मा रूसी सबै कागजात राख्न खोजे। 1774 मा, Graf व्लादिमीर Grigorevich resigns र Semenov मा निवास लाग्छ। क्याथरीन द्वितीय तिनीहरूलाई केही आफ्नो भाइ दिनुभएको भूमि Hatunskoy इलाकाका Alekseyu Grigorevichu प्रदान गरिएको थियो। केही स्रोतहरु अनुसार, वी जी Orlov उहाँले देशमा किनेको।
को अंग्रेजी शैलीमा
आनन्द, Orlov र Orlov-Davydov द्वारा स्वामित्व क्रान्ति नभएसम्म सम्पत्ति, यो savagely लुटेका थियो, राम्रो आपूर्ति दर्जनौँ निर्यात। पहिलो मालिक अर्थात् तुरुन्त अवकाश पछि, 1774 मा निर्माण गर्न थाले। उहाँले, समकालीनहरूको अनुसार, समय को सबै भन्दा राम्रो आर्किटेक्ट्स एक निमन्त्रणा, तर दस्तावेज बच्न थिएन जो ठ्याक्कै - K. रिक्त वा वी Bazhenov। भवन जग सम्झाउँछ धेरै विशेषज्ञहरु, कि उत्तरार्द्ध विश्वास गर्न इच्छुक छन् Mikhailovsky Castle वी Bazhenov द्वारा। त्यहाँ अन्य दृश्य हो। यो केवल मूल घर एक अंग्रेजी प्रभु को एक घर रूपमा गर्भधारण थियो ज्ञात छ (को अंग्रेजी अर्ल, शायद फ्रान्सेली विपरीत मनपराएका,)। यो एक उच्च पहाडी मा अपेक्षित निर्माण गर्न, र उहाँले तीन कथाहरू उठ्नेछ थियो। तर पाहुना घर को अनुरोध मा नदी नजिक हुनुभयो, र यो अन्ततः दुई-कथा थियो।
देश सम्पत्ति आनन्द सुसज्जित गर्न 1779 मा 1774 देखि। "Manor" - आवासीय, व्यापार, पार्क, केही अन्य भवनहरु र, एक नियम रूपमा, पार्क सहित एक जटिल implying एक शब्द। Orlov Manor, एक पहाडी को खुट्टा मा स्थित, एक सुन्दर परिदृश्य पार्क घेरे। परिदृश्य, वा अनियमित, पार्क - विशुद्ध ब्रिटिश आविष्कार। अंग्रेजी - आफ्नो नाम अर्को। प्रस्ट छ, उहाँलाई धन्यवाद Manor Semenov-आनन्द स्वामित्व को प्रभु स्मरण गराउन भएको थियो। को Homestead चर्च Nikolaya Chudotvortsa, जसको मण्डप व्लादिमीर को सम्मान मा consecrated थियो छ। यसको निर्माण लागि अनुमति 1777 मा प्राप्त भएको थियो। बीच outbuildings खलिहान बाहिर खडा छ, सेतो इँटा, को छद्म-गोथिक शैली सम्हाल्नुभएको एक smithy, केही Greenhouses र चिहान, एक पाइन निकुन्ज स्थित संग सजाया। यो मूलतः एक rotunda को रूप मा गरे, र therein मृत Orlovs भाइहरूलाई गाडे।
व्लादिमीर जी छोरी पछि मास्को मा काम गर्ने डी Gilardi, स्विस वास्तुविद्, को dilapidated rotunda सुन्दर समाधि काम प्रतिस्थापित। यो Manor छ भने Orlova आनन्द बेचिएको थियो। 1845 मा, छिट्टै आफ्नो मृत्यु EV Novosiltsev अघि née Orlova आफ्नो भान्जा वी पी Davydovu गर्न सम्पत्ति बेच्छ। उहाँले, पनि, यसको उपलब्धि लागि प्रसिद्ध वास् निमन्त्रणा। को Manor को सबै पछि मालिकहरूको लागि Semenov-आनन्द सुधार र आधुनिक conveniences संग सुसज्जित। दुई Greenhouses - जब वी पी Davydove को भव्य हवेली गर्न terraces, rotunda थपिएका थिए, र पार्क बाहिर आउने द्वारा। पार्क नै राम्रो लागि परिवर्तन भइरहेको छ। एक गणना ए Orlov-Davydov, अर्को पाहुना आनन्द बनेर, गहिरो कृतज्ञता कांस्य बनेको क्याथरीन द्वितीय बस्ट घरमा अघि राखे को एक चिन्ह रूपमा। सबै Orlov आफ्नो प्रकारको उनको benefactress विश्वास गरे। यहाँ एक सय वर्ष प्रसिद्ध लेखकहरू र रूस को सबै भन्दा राम्रो मान्छे द्वारा भ्रमण थियो Lomonosov व्यक्तिगत पुस्तकालय र दूरबिन, राखिएको।
निस्सन्देह, यो सम्पत्ति क्रांति देखि भोगे छ - यो तहसनहस र लुटेका। त्यसपछि त्यहाँ प्राविधिक र NKVD स्कूल थिए। अब सबै को सुन्दर सम्पत्ति त्यागेर एक भयानक अवस्थामा छ। एकपटक महान् दरबार जटिल, त्यहाँ सबै भाइहरूलाई Orlov "विनाशको खतरा अन्तर्गत संसारमा 100 स्मारक," प्रतिभा एफ Shubin, रूपमा सूचीकृत को काम को छातीहरू थिए, र यो प्रोत्साहन छ भन्ने तथ्यलाई ज्ञात। यो अस्पताल को संघीय सुरक्षा सेवा क्षेत्र मा स्थित छ रूपमा सम्पत्ति सुरक्षित छ भन्ने तथ्यलाई खुसी। तपाईं निजी परिवहन द्वारा त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्छन् - द्वारा सडक फा-108।
आनन्द कालुगा क्षेत्र
एकपटक भव्य जटिल को नाम कान खुसी सुनिन्छ, र त अक्सर आधुनिक निजी सम्पत्ति वा केही अन्य परिसर दिइएको नाम हो। त्यहाँ एक आधुनिक Manor आनन्द छ। कालुगा क्षेत्र उत्कृष्ट eponymous बोर्डिङ दावा। यो एक सन्टी निकुन्ज मा ओका नदी को बैंक मा स्थित छ। एक अद्भुत पूर्वाधार भएको यो आरामदायक आधुनिक वर्ष राउन्ड बोर्डिङ घर, राम्रो बाँकी लागि आवश्यक सबै संग सुसज्जित। न्यानो उज्यालो कटेज (44 घर) र दुई-मंजिल्ला रेस्टुरेन्ट "टा-रस" एक सम्मेलन हल र एक पल्ट, किनमेल, रूसी सना र एक स्पा, पूल र बिलियर्ड्स, खुला फुटबल र भलिबल कोर्ट, को ओका को बैंकहरू मा एक राम्रो-groomed समुद्र तट संग - बस गणना छैन तर सबै कुरा को सम्पत्ति को वेबसाइट मा पाउन सकिन्छ। को M2 राजमार्ग (सिम्फरोपोल) मा हुन सक्छ यो स्वर्ग प्राप्त गर्न। हामी गाउँमा Balabanovo गर्न पालो जाने छ। अर्को पालो - Serpukhov गर्न। यसबाहेक, शहर एउटा सीधा लाइन मा। मा Serpukhov तेस्रो यातायात प्रकाश हुनुपर्छ, दायाँ बारी र Protvino प्राप्त, त्यसपछि गाउँ Kalinovo ड्राइभबाट। युद्ध को एक ट्यांक एउटा स्तम्भ अघि, टर्न बाँया र 11 किलोमिटर पछि आनन्द एक उत्कृष्ट सम्पत्ति हुनेछ।
क्राइमन "Manor आनन्द"
"आनन्द Manor" - आफूले पाएको नयाँ प्रायद्वीप पनि एउटै नाम अन्तर्गत एक निजी बोर्डिङ घर छ। क्रिमीआ काला र Azov समुद्र द्वारा धोए छ। उत्तरार्द्ध को बैंक मा, Kerch देखि 40 किलोमिटर र 60 Feodosiya देखि, Kozyatyn खाडी को केन्द्र मा, यो अद्भुत बोर्डिङ घर, रिमोट समुद्र 100 मीटर देखि स्थित छ। अन्य रिसोर्ट्स देखि यो त्यहाँ प्रमाणित राम्रो पानी छन् भन्ने तथ्यलाई देखि मुख्यतया अलग जो भोजन-निको यसको क्षेत्रमा आंत्र समारोह पत्र गर्न सक्ने छ। को घरहरू भित्ताहरू पनि धेरै तातो दिन मा, कोठा मा ठंडक प्रदान, प्राकृतिक सामाग्री खोल बनेको छन्। छैन धेरै टाढा जो एक बोर्डिङ घरमा प्राप्त गर्न सकिन्छ उपचारात्मक माटोको संग Chikrak ताल छ। "Manor आनन्द" को क्षेत्र मा, आवश्यक पूर्वाधार बाहेक, त्यहाँ दाखबारी र एक सुन्दर बगैचा हो। दुई-मंजिल्ला आवास, छायाँपारिएको balconies संग। निर्वाह खेती भोजन को एक किसिम प्रदान गर्दछ। यो क्राइमन "Manor आनन्द" छ। यसलाई कसरी पुग्न? Novootradnoe गाउँमा जो यो बस मार्ग Kerch संग जोडिएको छ। ठेगाना सडक पिडमन्ट, 50 बोर्डिङ।
हामी पानी आवश्यक किन थाहा छ?
अस्ताना जनसंख्या: गतिशीलता, जनसंख्या र जातीय संरचना
Stripplastika - यो के हो? लाभ stripplastiki
क्रिमीआ को गणतन्त्र को राजधानी। क्रिमीआ को गणतन्त्र को मन्त्रीहरु को परिषद
कोट को Yoshkar-ओला को हथियार: विवरण, इतिहास, फोटो
VAZ 2110 सही तरिकाले चयन गर्नुपर्छ
Dzyunitiro Tanidzaki: ठूलो जापानी लेखक को जीवनी र काम
मास्को मा Glazunov संग्रहालय: ठेगाना, सञ्चालनको घण्टा। कलाकार Glazunov इल्या Sergeevich
आफ्नो जीवनको लागि फैशन सुप
कसरी bullfinch सुन्दर आकर्षित गर्न?
आफ्नै हातले अनुहार (फोटो संग) को लागि नुस्खा क्रीम। अनुहार क्रीम विरोधी शिकन
कसरी "COP" मा उपनाम रोज्नुहुन्छ?